ကြက်သားမော်ကွန်းတိုက် - Tele RELAY တစ်ခု
အနှေး cooker ထောပတ်ကြက်သားရည် - နယူးယောက်အစားအစာ - New York Times
Tele RELAY တစ်ခု AVR 4, 2020 0
Toutes les versions de poulet au beurre n'utilisent pas de beurre. Le lait de coco confère à ce poulet à la mijoteuse sa richesse crémeuse. Voici une recette rapide pour le cuisinier: il suffit de la préparer plus…
Piccata ကြက်သားရည် - NYT အစားအစာ - New York Times
Tele RELAY တစ်ခု AVR 3, 2020 0
Le poulet piccata est un aliment de base italo-américain bien-aimé pour ses saveurs piquantes bercées dans une sauce pan soyeuse et riche en beurre. Cela ne fait pas de mal non plus de cuire très rapidement. Cette version…
နဂါးနှင့်ငရုတ်ကောင်းကညွတ် - နယူးယောက်တိုင်းမ်
Tele RELAY တစ်ခု AVR 1, 2020 0
ငရုတ်ကောင်းမှုန်၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ပျားရည်နှင့်ဆန်ရှလကာရည်တို့တွင်နနွင်း၏အရသာရှိသောမြေသားအရည်အသွေးကိုပေါ်လွင်စေသည်။ ပါးလွှာသောကညွတ်သည်များစွာမလိုအပ်ပါ။
artichokes နှင့်သံပုရာစာရွက်နှင့်အတူကြက်သား - New York Times
Tele RELAY တစ်ခု 31 ပင်လယ်, 2020 0
အကယ်၍ artichok များကိုကျွန်ုပ်ထက်များစွာချစ်မြတ်နိုးပါကမော်ရိုကိုမှဂျူးများပသခါပွဲတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသောဤစာရွက်သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်သောသို့မဟုတ်ခဲနေသော artichokes များကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Adobo ကြက်သားကြော် - နယူးယောက်အစားအစာ - New York Times
Tele RELAY တစ်ခု 27 ပင်လယ်, 2020 0
၎င်းသည်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏အမျိုးသားပန်းကန်ဖြစ်ပြီးကြက်၊ ဝက်သားနှင့်ငါးတို့မှပြုလုပ်သည်ဖြစ်သည့်ကျွန်းပေါင်း ၇၁၀၀ ကျော်တွင်ပြင်းထန်။ အရသာရှိသောဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများဖြစ်သည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, ပရိုတိန်းဖြစ်ပါတယ် ...
တင်သွင်းသည့်ကြက်သားသည်တောင်အာဖရိကနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြား - Jeune Afrique အကြားကွဲလွဲမှုရှိသည်
Tele RELAY တစ်ခု 24 ပင်လယ်, 2020 0
တောင်အာဖရိကရှိ Hartbeesfontein ရှိခြံတစ်ခုမှကြက်များ။ © Siphiwe Sibeko / REUTERS ၏အခွင့်အရေးတိုးမြှင့်ပေးရန် Pretoria ၏ဆုံးဖြတ်ချက်...
အရိုးရှင်းဆုံးကြက်သားခေါက်ဆွဲရည် - New York Times
Tele RELAY တစ်ခု 17 ပင်လယ်, 2020 0
တိုတောင်းသောကြက်သားဟင်းချိုချက်ပြုတ်နည်းအများစုသည်ကြက်သားကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်လက်တွေ့ကျသော hack ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ချက်ပြုတ်ထားသောကြက်သားသည်အရသာကိုကောင်းစွာမစုပ်နိုင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, sautéမြေပြင်ကြက်သား ...
နယူးယောက်တိုင်းမ်စ် (Winter Squash Recipes) ဖြင့်ကြက်သားခြေထောက်များလှော်သည်
Tele RELAY တစ်ခု 16 ပင်လယ်, 2020 0
လှော်သောကြက်သားခြေထောက်များသည်သီတင်းပတ်ကုန်၏အစားအစာများ၏အရည်ရွှမ်း။ အမဲသားစင်တာဖြစ်နိုင်သည်။ delicata squash ကိုထည့်ပါ၊ အလျင်အမြန်မေပယ်ရည်နှင့်ထောပတ် glaze ထဲသို့ပစ်ချလိုက်သည်။
သိကောင်းစရာများ - သင်မတိုင်မီသင်သိလိုသည့်အစားအစာ ၁၁ ခု
Tele RELAY တစ်ခု 13 ပင်လယ်, 2020 0
Spatchcocked ကြက်သားမြက်ပင်ထောပတ်စာရွက်နှင့်အတူ - New York Times
Tele RELAY တစ်ခု 11 ပင်လယ်, 2020 0
Spatchcocking (butterflying ဟုလည်းခေါ်သည်) ကြက်သားက၎င်းအားရွှေသားရေဖြင့်ပြည့်ဝနူးညံ့ပြီးအရည်ရွှမ်းသောအသားများကိုပေးသည်။ ဒါဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည် ...
1234လာမယ့်